ओबामा बनाम म्याककेन: भुक्तान गरिएको अर्गानिक खोज
शुक्रवार, अक्टुबर 31, 2008 शनिबार, जनवरी 14, 2017 Douglas Karr
यदि त्यहाँ एउटा कुरा छ जुन २०० 2008 को चुनावको परिदृश्य परिवर्तन भएको छ भने, यो इन्टरनेटको प्रयोग हो। म केही हप्ता अघि यहाँ इण्डियानामा एक स्थानीय रिपब्लिकन नेतासँग कुरा गर्दै थिएँ र उसले पूर्ण रुपमा स्वीकारे कि पार्टीले केही गर्नै पर्छ।
स्पायफु कीवर्ड स्मार्टसर्च भुक्तान गरिएको र जैविक दुबै खोजी ईन्जिन तथ्या .्कहरूको अनुसन्धानको लागि उत्कृष्ट सेवा हो। यो हप्ता तिनीहरूले सुरूवात गरे स्पाइफु कोम्बत। ईन्टरफेसले तपाईंलाई दुई प्रतिस्पर्धी साइटहरू र समीक्षा गर्न अनुमति दिन्छ जहाँ तिनीहरूको ओभरल्यापि keywords कीवर्डहरू साथै तिनीहरूको भिन्नता छन्।
यदि स्पाईफूले देखाउँछ कसरी कुञ्जी शब्दहरू प्रतिस्पर्धीको अभियानमा खेल्छन्, त्यसपछि स्पाईफु कोम्बतले देखाउँदछ कि यी प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईंको अर्को रणनीतिक चाल कसरी निर्धारण गर्छन्। स्पाईफु कोम्बतमा वेबसाइटहरू प्रविष्ट गरेर, नतिजाले प्रत्येक डोमेनको कुञ्जी शब्द सूची प्रतिद्वन्द्वीहरूको लागि सामान्य भएको विशेष शब्दहरू र शब्दहरूमा विभाजित गर्दछ। तपाइँका प्रतिद्वन्द्वीहरू? साधारण सूची तपाईको आफ्नो रणनीति बनाउन को लागी कम फांसी फल मा बदलिन्छ।
हामीले भेट्टायौं कि SEM / SEO पेशेवरहरू जागल गर्ने प्रतिस्पर्धीहरूसँग घुसिए? कुञ्जी शब्द सूचि, वा तिनीहरू केवल केहि चाहान्थे उनीहरूको कमजोर स्पटहरू हटाउनका लागि। स्पाईफु कोम्बतले ती कार्यहरूलाई एकमा जोड्दछ। के तपाइँ प्राप्त गर्नुहुनेछ एक अन्तर्क्रियात्मक ग्राफिक, कसरी तपाइँ द्वारा चयन डोमेनहरु एक अर्को बिरूद्ध स्ट्याक द्वारा निर्धारण।
यो एक अद्भुत प्रविधि हो र मेरो कथा बताउनुहोस् बराक ओबामाको अविश्वसनीय इन्टरनेट अनुसरण गर्दै - साथै जोन म्याककेनले कसरी पछाडि लड्दैछ भनेर.
अर्गानिक खोज भोल्यूम: ओबामाले म्याककेनलाई पिटे:
भुक्तान गरिएको भोल्यूम: म्याककेन लड़ाई फिर्ता:
यहाँ एकदम कहानी छ जुन मुख्यधारा मिडियाले भनेको छैन, यो वास्तवमै हुनु आवश्यक छ! त्यो प्रविधिले चुनावमा प्रभाव पार्न सक्छ धेरै रमाईलो छ!
टैग: बाराक ओबामाजोन एमकेनओबामाओबामा बनाम एमकेनजैविक बनाम भुक्तान गरियोराजनीतिक अभियानराजनीतिक जैविक खोजीराजनीतिक भुक्तान खोजी
मानवता र ब्लगि Trustमा भरोसा
के ओबामा नेक्स्ट भिस्टा हो?
मैले आज केहि साथीहरूलाई भनेको थिएँ कि मलाई लाग्यो कि ओबामाले इन्टरनेटको प्रयोग उसको सफलताको प्रमुख कारक हो, सूचना साइट (वोटफेरिभञ्च डट कम र ट्याक्सटफ्याक्ट्स डट ओआरजी) ट्वीटर र अन्य सोशल मिडियामा राखेर उनले अंगाल्ने उपाय भेट्टाए। एक पूरै पुस्ता र उनीहरूको मनपर्दो विधिमा तिनीहरूसँग कुराकानी।
अभियानको भविष्य ओबामा-बिडेन शिविरले निर्माण गरिरहेको छ, हामी आउँदो वर्षहरूमा यसमा अझ बढी देख्नेछौं।
भाँडा यूके छोड्नुहोस्
नोभेम्बर,, २०१ at 3::2008 बिहान
निष्पक्ष हुनको लागि म तपाईंसँग त्यहाँ एडमसँग सहमत छु, यसले ठूलो असर पार्दै पक्का छ कि उसले पक्का छ कि उसले के गरिरहेको छ थाहा छ!
नोभेम्बर २०, २००। 3::2008 अपराह्न
के स्पाईफुको बारेमा मेरो दिमागमा वास्तवमा उड्ने कुरा उनीहरूले प्रदान गर्ने जानकारीको भव्य मात्रा हो। उनीहरू कहाँ छन् उनीहरूको नम्बरहरू ?! मलाई लाग्दैन कि यस्तो विस्तृत रिपोर्टहरू गोपनीयता नियमहरूको कारण उपलब्ध हुनेछ।
नोभेम्बर,, २०१ at 5::2008 बिहान
अब जुन ओबामाले जित्यो जस्तो तपाईंलाई लाग्छ कि राम्रो तलब वा जैविक 😉
नोभेम्बर २०, २००। 5::2008 अपराह्न
त्यहाँ पीपीसी र जैविक खोजी रणनीतिहरूका फाइदाहरू र नोक्सानहरू छन्, तर मैले सँधै सोचेको छु कि विश्वासको जग र ठूलो अनुसरण गरेर एक ब्लग र जैविक खोजीको काम हो।
म भन्छु कि सबै मूर्खहरुलाई मार्नुहोस्, यो हाम्रो भावी राजनीतिज्ञहरुको भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका हुन सक्छ!
मार्स 16, 2010 मा 6: 14 एएम
र कसरी Semrush बारेमा? के तपाईंले कहिल्यै त्यो सेवा प्रयास गर्नुभयो?